Senior General Min Aung Hlaing ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အခု ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်ဟာ စိန်ရတုရက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာမို့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးခြေလှမ်းသစ်တွေ စရမယ်လို့ စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က နှစ်သစ်မိန့်ခွန်းမှာပြောခဲ့တဲ့အပေါ်၊ လက်တွေ့ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ကတိစကားပါမှရမယ်လို့ သုံးသပ်မူတွေရှိလာပါတယ်။
လက်တွေ့မြေပြင်မှာ တိုက်ပွဲတွေဆက်လုပ်နေပြီး၊ အရေးပါတဲ့ ဖယ်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီရရေး ရည်မှန်းချက်မပါလျှင် ဘာအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ သံသယရှိတာကြောင့် အလွတ်သဘောတောင် စဆွေးနွေးဖို့ ခက်မယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ပါဝင်ခဲ့သူတွေက ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်း KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမူး ဖဒိုတာဒိုမူး၊ NCA အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းစု PPST ပူးတွဲဦးဆောင်သူ ဦးခွန်ဥက္ကာနဲ့ မြန်မာ့အရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်တို့ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုတာဒိုမှူး က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရဲ့ နှစ်သစ်ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းမှုကို အခုလိုစသုံးသပ်ပြပါတယ်။
ဖဒိုတာဒိုမှူး ။. ။ ငြိမ်းချမ်းရေးရတဲ့ဟာက ကျနော်တို့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာ တည်ဆောက်ပြီး ကျနော်တို့အမှန်တကယ် သဘောတူညီထားတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို လိုက်နာမှုကတဆင့် ဘယ်လိုရှာကြမလဲဆိုတာက မူတည်တာပေါ့။ ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို နုတ်ဖျားကနေ လိုသလိုပြောနေပြီးတော့ လက်တွေ့မှာတော့ သူတို့အသာစီးရဖို့နဲ့ သူတို့လိုချင်တာဟာကို ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုလုပ်သွားတဲ့ ပုံစံကတော့ ကျနော်တို့မှာ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရှိထားတယ်။ ကျနော်တို့ချည်းမဟုတ်ပဲ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေကကော အထူးသဖြင့် ချုပ်သမျှ စာချုပ်တွေမှာ ကျနော်တို့ဖက်ကသာလျှင် Follow လုပ်ရမယ်။ သူတို့ဖက်က လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးလုပ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်နိုင်စရာမရှိပါဘူး။ သူတို့ပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ ဒီနိုင်ငံအတွက်ကတော့ လက်တွေ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် NCA အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေ PPST အဖွဲ့ရဲ့ ပူးတွဲဦးဆောင်သူ ဦးခွန်ဥက္ကာကလည်း အခုလိုရည်ရွယ်ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဦးခွန်ဥက္ကာ ။. ။ ဒီအကြမ်းအရမ်းနဲ့ သွားတဲ့ တနှစ်ကာလမှာ ရလဒ်က အကောင်းမထွက်ပဲနဲ့ ပိုပိုဆိုးလာတယ်။ ဖိနိုပ်လေ ထကြွလေဆိုတဲ့ နိယာမအရ ဆန်ကျင်တဲ့ဖက်ကလည်း ပိုပြီးတော့ ဆန့်ကျင်လာတဲ့အခါကြတော့ နည်းပရိယယ်အရ ၂ဝ၂၂ ထဲမှာ အလှည့်အပြောင်းမလုပ်ရင် စစ်ကောင်စီက ဆက်ဖို့ခက်နိုင်တယ်လို့ လူကြီးတွေလည်း တွက်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ခေါင်းလှည့်မယ် ဦးတည်မယ် အဲဒါကြောင့်အလွတ်သဘောတွေစတင်မယ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရအောင်ဆိုတဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှုမျိုးတွေပေါ်လာတာ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါပေမယ့် ဖဒိုတာဒိုမှူး ကတော့ နောက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နိုင်တာအပေါ် အခုလိုဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ဖဒိုတာဒိုမှူး ။. ။ အဓိက ကတော့ သူတို့ Divided and Rule လုပ်တာ ကျနော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ စစ်ဆင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် ပြည်မမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို သူတို့က အခွင့်အရေးတွေပေးပြီးတော့ ပြည်မနဲ့ ပြည်နယ်တွေနဲ့ ပေါင်းစည်းမှုမရှိအောင် အဓိက ဗမာလူထု့တွေနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မပေါင်းနိုင်အောင်လုပ်တာက တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ အခုကတော့ အထူးသဖြင့် အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ တပြည်လုံး အုံကြွလာပြီးတော့ နောက်ဆုံး စစ်တပ်ကို လက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားတခုမှာ တိုင်းရင်းသားတွေကို သူတို့နှစ်သိပ်နိုင်တဲ့အနေအထားများရှိသလားဆိုတာ သွေးတိုးစမ်းကြည့်တဲ့သဘောလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ပြောတာအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးသန်းစိုးနိုင် က အခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။
ဦးသန်းစိုးနိုင် ။. ။ အခုလာမယ့် ပြည်ထောင်စုနေ့ဆိုတာက ၇၅ နှစ်ပြည့်တဲ့တိုင်အောင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူး။ တပြည်လုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေက ဗမာပြည်ရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာ လွှမ်းမိုးထားတဲ့အနေအထားမှာ ဒီနှစ် ပြည်ထောင်စုနေ့ စိန်ရတု့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မယ့်အနေအထားမရှိပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့် ၂ဝ၂၃ ခုနှစ်ကို လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ တွဲပြီးပြောလိုက်တာ။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ အခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို. ဘယ်လိုစချင်ပါသလဲလို့ မေးရာမှာ ဦးခွန်ဥက္ကာက
ဦးခွန်ဥက္ကာ ။. ။ အလွတ်သဘောစဖို့က အဖွဲ့အတော်များများ ကျနော်တီးခေါက်ကြည့်ရာမှာ ဗုံးတွေကြဲနေတယ်။ လက်နက်ကြီးတွေပစ်နေတယ်။ ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာ။ ရန်လိုမှုများနေတယ်။ တစုံတရာ စိတ်ကောင်းပြတဲ့အနေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို လျှော့ပြမှ ဒါမှမဟုတ် ရပ်စဲပြမှ။ လက်တွေ့မြေပြင်မှာ ပြုပြင်ပြမှ အလွတ်သလောတွေ့ရမယ်လို့တွက်တယ်ဗျ။ အကြံပေးချင်တာက RCSS ထုတ်ပြန်ချက်ကို တချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီကို တကယ်တက်လှမ်းဖို့ ဆိုရင် ကြိုဆိုတယ်လို့ သူပြောခဲ့တယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာ ခံဝန်ချက်ပါထဲ့လိုက်။ ကျနော်တို့ ဖက်ဒရယ် နဲ့ ဒီမိုကရေစီကို နိုင်ငံကို တည်ထောင်မယ် လူအခွင့်အရေးကို သွားမယ်ဆိုတာ။ အာမခံချက်ထဲ့ခေါ်လိုက်ရင် ကောင်းပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီအပေါ်မှာ ဖဒိုတာဒိုမှူး ကလည်း ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ပြည်သူအပေါ် ဖိနိုပ်တဲ့ တပ်မျိုးနဲ့ တော့ ဆက်ပြီး မပြောတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြင်သဘောထား
စဈကောငျစီအကွီးအကဲ ရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးစကားအပျေါ တုံ့ပွနျသုံးသပျခကျြတခြို့
အခု ၂ဝ၂၂ ခုနှဈဟာ စိနျရတုရကျတှနေဲ့တိုကျဆိုငျနတောမို့ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးခွလှေမျးသဈတှေ စရမယျလို့ စဈကောငျစီခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျမူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျက နှဈသဈမိနျ့ခှနျးမှာပွောခဲ့တဲ့အပျေါ၊ လကျတှကေ့ောငျးတဲ့လုပျရပျနဲ့ကတိစကားပါမှရမယျလို့ သုံးသပျမူတှရှေိလာပါတယျ။
လကျတှမွေ့ပွေငျမှာ တိုကျပှဲတှဆေကျလုပျနပွေီး၊ အရေးပါတဲ့ ဖယျဒရယျနဲ့ဒီမိုကရစေီရရေး ရညျမှနျးခကျြမပါလြှငျ ဘာအတှကျဆှေးနှေးဖို့ သံသယရှိတာကွောငျ့ အလှတျသဘောတောငျ စဆှေးနှေးဖို့ ခကျမယျလို့ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲ ပါဝငျခဲ့သူတှကေ ထောကျပွလိုကျပါတယျ။
ဒီအကွောငျး KNU ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး အထှထှေအေတှငျးရေးမူး ဖဒိုတာဒိုမူး၊ NCA အပဈရပျလကျမှတျထိုး တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ပေါငျးစု PPST ပူးတှဲဦးဆောငျသူ ဦးခှနျဥက်ကာနဲ့ မွနျမာ့အရေးလလေ့ာသုံးသပျသူ ဦးသနျးစိုးနိုငျတို့ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ဖဒိုတာဒိုမှူး ။. ။ ငွိမျးခမျြးရေးရတဲ့ဟာက ကနြျောတို့ သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးတှကွေားမှာ တညျဆောကျပွီး ကနြျောတို့အမှနျတကယျ သဘောတူညီထားတဲ့ သဘောတူညီခကျြတှကေို လိုကျနာမှုကတဆငျ့ ဘယျလိုရှာကွမလဲဆိုတာက မူတညျတာပေါ့။ ကနြျောတို့အတှအေ့ကွုံအရဆိုရငျ ငွိမျးခမျြးရေးကို နုတျဖြားကနေ လိုသလိုပွောနပွေီးတော့ လကျတှမှေ့ာတော့ သူတို့အသာစီးရဖို့နဲ့ သူတို့လိုခငျြတာဟာကို ဖွဈမွောကျအောငျလုပျတဲ့အပိုငျးကိုလုပျသှားတဲ့ ပုံစံကတော့ ကနြျောတို့မှာ အဲဒီအတှအေ့ကွုံတှေ အမြားကွီးရှိထားတယျ။ ကနြျောတို့ခညျြးမဟုတျပဲ တခွားတိုငျးရငျးသားတှကေကော အထူးသဖွငျ့ ခြုပျသမြှ စာခြုပျတှမှော ကနြျောတို့ဖကျကသာလြှငျ Follow လုပျရမယျ။ သူတို့ဖကျက လုပျစရာမလိုဘူးဆိုပွီးလုပျတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးကတော့ ဘယျတော့မှ အောငျမွငျနိုငျစရာမရှိပါဘူး။ သူတို့ပွောတဲ့ငွိမျးခမျြးရေးကတော့ ဒီနိုငျငံအတှကျကတော့ လကျတှဖွေ့ဈမှာမဟုတျပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလို ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးအပျေါ NCA အပဈရပျလကျမှတျထိုးထားတဲ့အဖှဲ့တှေ PPST အဖှဲ့ရဲ့ ပူးတှဲဦးဆောငျသူ ဦးခှနျဥက်ကာကလညျး အခုလိုရညျရှယျပုံရတယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဦးခှနျဥက်ကာ ။. ။ ဒီအကွမျးအရမျးနဲ့ သှားတဲ့ တနှဈကာလမှာ ရလဒျက အကောငျးမထှကျပဲနဲ့ ပိုပိုဆိုးလာတယျ။ ဖိနိုပျလေ ထကွှလဆေိုတဲ့ နိယာမအရ ဆနျကငျြတဲ့ဖကျကလညျး ပိုပွီးတော့ ဆနျ့ကငျြလာတဲ့အခါကွတော့ နညျးပရိယယျအရ ၂ဝ၂၂ ထဲမှာ အလှညျ့အပွောငျးမလုပျရငျ စဈကောငျစီက ဆကျဖို့ခကျနိုငျတယျလို့ လူကွီးတှလေညျး တှကျနိုငျတာပေါ့ဗြာ။ ဒါကွောငျ့ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ ခေါငျးလှညျ့မယျ ဦးတညျမယျ အဲဒါကွောငျ့အလှတျသဘောတှစေတငျမယျ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးရအောငျဆိုတဲ့ ဖိတျချေါမှုမြိုးတှပေျေါလာတာ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါပမေယျ့ ဖဒိုတာဒိုမှူး ကတော့ နောကျရညျရှယျခကျြဖွဈနိုငျတာအပျေါ အခုလိုဝဖေနျလိုကျပါတယျ။
ဖဒိုတာဒိုမှူး ။. ။ အဓိက ကတော့ သူတို့ Divided and Rule လုပျတာ ကနြျောတို့ လှနျခဲ့တဲ့ကာလတှေ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော စဈဆငျရေးလုပျမယျဆိုရငျ ပွညျမမှာ နိုငျငံရေးပါတီတှကေို သူတို့က အခှငျ့အရေးတှပေေးပွီးတော့ ပွညျမနဲ့ ပွညျနယျတှနေဲ့ ပေါငျးစညျးမှုမရှိအောငျ အဓိက ဗမာလူထု့တှနေဲ့ ပေါငျးပွီးတော့ တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ မပေါငျးနိုငျအောငျလုပျတာက တောကျလြှောကျလုပျခဲ့တာပေါ့။ အခုကတော့ အထူးသဖွငျ့ အာဏာသိမျးမှုအပျေါအခွခေံပွီးတော့ တပွညျလုံး အုံကွှလာပွီးတော့ နောကျဆုံး စဈတပျကို လကျမခံနိုငျတဲ့အနအေထားတခုမှာ တိုငျးရငျးသားတှကေို သူတို့နှဈသိပျနိုငျတဲ့အနအေထားမြားရှိသလားဆိုတာ သှေးတိုးစမျးကွညျ့တဲ့သဘောလောကျပဲဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျပွောတာအပျေါ မွနျမာနိုငျငံရေးလလေ့ာသူ ဦးသနျးစိုးနိုငျ က အခုလိုသုံးသပျပါတယျ။
ဦးသနျးစိုးနိုငျ ။. ။ အခုလာမယျ့ ပွညျထောငျစုနဆေို့တာက ၇၅ နှဈပွညျ့တဲ့တိုငျအောငျ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့လုပျနိုငျတဲ့အနအေထားမရှိပါဘူး။ တပွညျလုံးမှာဖွဈနတေဲ့ ပွညျသူတျောလှနျရေးလှုပျရှားမှုတှကေ ဗမာပွညျရဲ့ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျမှာ လှမျးမိုးထားတဲ့အနအေထားမှာ ဒီနှဈ ပွညျထောငျစုနေ့ စိနျရတု့မှာ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို အကောငျထညျဖျောနိုငျမယျ့အနအေထားမရှိပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ လာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမယျ့ ၂ဝ၂၃ ခုနှဈကို လှတျလပျရေးနနေဲ့ တှဲပွီးပွောလိုကျတာ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလိုငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို. ဘယျလိုစခငျြပါသလဲလို့ မေးရာမှာ ဦးခှနျဥက်ကာက
ဦးခှနျဥက်ကာ ။. ။ အလှတျသဘောစဖို့က အဖှဲ့အတျောမြားမြား ကနြျောတီးခေါကျကွညျ့ရာမှာ ဗုံးတှကွေဲနတေယျ။ လကျနကျကွီးတှပေဈနတေယျ။ ပွညျသူတှဒေုက်ခရောကျတာပေါ့ဗြာ။ ရနျလိုမှုမြားနတေယျ။ တစုံတရာ စိတျကောငျးပွတဲ့အနနေဲ့ တိုကျခိုကျမှုတှကေို လြှော့ပွမှ ဒါမှမဟုတျ ရပျစဲပွမှ။ လကျတှမွေ့ပွေငျမှာ ပွုပွငျပွမှ အလှတျသလောတှရေ့မယျလို့တှကျတယျဗြ။ အကွံပေးခငျြတာက RCSS ထုတျပွနျခကျြကို တခကျြကွညျ့လိုကျပါ။ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုတညျဆောကျဖို့၊ ဒီမိုကရစေီကို တကယျတကျလှမျးဖို့ ဆိုရငျ ကွိုဆိုတယျလို့ သူပွောခဲ့တယျလေ။ ဒါကွောငျ့ ဖိတျချေါတဲ့နရောမှာ ခံဝနျခကျြပါထဲ့လိုကျ။ ကနြျောတို့ ဖကျဒရယျ နဲ့ ဒီမိုကရစေီကို နိုငျငံကို တညျထောငျမယျ လူအခှငျ့အရေးကို သှားမယျဆိုတာ။ အာမခံခကျြထဲ့ချေါလိုကျရငျ ကောငျးပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီအပျေါမှာ ဖဒိုတာဒိုမှူး ကလညျး ကွိုဆိုလိုကျပွီး ပွညျသူအပျေါ ဖိနိုပျတဲ့ တပျမြိုးနဲ့ တော့ ဆကျပွီး မပွောတော့ဘူးလို့ပွောခဲ့ပါတယျခငျဗြာ။